परिक्षण - नारी
के हो आफ्नो रोमान्टिक टाइप
तपाईं आफ्नो पहिलो भ्यालेन्टाइन–डे पार्टनरसित कसरी मनाउन चाहनुहुन्छ ?क) भ्यालेन्टाइन–डे मनाउन खासै रुचि छैन तर पनि पार्टनरको इच्छा छ भने त्यसलाई निर्वाह गर्नुहुन्छ,ख) अफिसबाट एकदिन बिदा लिनुहुन्छ । पूरा दिन पार्टनरका साथमा घुम्न जानुहुन्छ । केही नयाँ खानेकुरा बनाउनुहुन्छ र ऊसँगै बसेर भविष्यका योजना तयार पार्नुहुन्छ,ग) बढी खर्च गर्नुको साटो पूरा दिन पार्टनरका साथ बस्न रुचाउनुहुन्छ,घ) आफ्नो भावना उनीसित शेयर गर्नुहुन्छ,ङ) केही फिल्मी स्टाइल अपनाउनुहुन्छ । होटलमा फूलका साथ क्यान्डल लाइट डिनर लिन चाहनुहुन्छ जसको ब्याकग्राउन्डमा मधुर संगीत बज्छ । राति लङ ड्राइभका लागि निस्कनुहुन्छ ।तपाईं उनलाई कसरी खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ ?क) थाङ्क यु भनेर वा कुराले,ख) आफ्नो अदाबाट,ग) प्रेमपूर्ण कुराकानी एवं रोमान्टिक व्यवहारबाट,घ) उनलाई खुसी तुल्याउने हरसम्भव प्रयास गर्नुहुन्छ,ङ) कोठामा मैनबत्ती, सुगन्ध, हल्का म्युजिक, मधुरो उज्यालो आदिको व्यवस्था गरी रोमान्टिक मुड सिर्जना गर्नुहुन्छ ।पार्टनरले कतै वाक गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ...क) इन्कार गर्नुहुन्छ, कारण तपाईंले भर्खरै मात्र पेडिक्योर गराउनुभएको छ,ख) आफूलाई मनपर्ने फ्लेभरको बरफको गोला आफ्नो हातमा भएको कल्पना गर्नुुहुन्छ,ग) घुम्ने ठाउँ सफा र रमाइलो छ भने जान रुचाउनुहुन्छ,घ) यस्तो योजना बनाएकोमा उनलाई बारम्बार ‘आई लभ यु’ भन्नुहुन्छ,ङ) उनको हात समातेर कल्पनाको सागरमा डुब्नुहुन्छ ।तपाईंको रोमान्टिक नाइट आउट आइडिया कस्तो छ ?क) आफ्ना श्रीमान्सित क्लब जानुहुन्छ जहाँ मित्रहरूसित पनि भेटघाट हुन्छ,ख) जूनेली रातमा आकाशमुनि बस्न चाहनुहुन्छ,ग) सहरको कुनै राम्रो रेस्टुराँमा डिनर गर्नुहुन्छ,घ) यस्तो ठाउँमा समय बिताउनुहुन्छ जहाँ तपाईं दुईजनाबाहेक अरू कोही नहोस्,ङ) घरको सोफामा सँगै बसेर टिभी हेर्नुहुन्छ ।पार्टनरसँग स–साना कुरामा विवाद भए स्थितिलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?क) तपाईं त्यस्तो केही नभएको जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ,ख) पार्टनरले रुचाएको ठाउँमा जाने योजना बनाउनुहुन्छ,ग) पार्टनरलाई मनपर्ने आइसक्रिम पार्लर लानुहुन्छ,घ) आफूतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न र स्थितिबाट ध्यान हटाउन रुन थाल्नुहुन्छ,ङ) फूलका साथ सरी कार्ड दिनुहुन्छ ।पार्टनर एक महिनाका लागि सहर छोडेर बाहिर कतै जाँदैछन् भने तपाईंले उनलाई पठाउने अन्तिम टेक्स्ट म्यासेज के हुनेछ ?क) बाई....सी यु सुन,ख) फोटो लिन नबिर्सनुहोला, सम्भव भएसम्म फेसबुकमा अपडेट गर्नुहोला,ग) टेक केयर, लभ यु, कम व्याक सुन,घ) आफूलाई साथ दिने कोही न कोही हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ,ङ) तपाईंबिना सबै कुरा बिरानो हुन्छ । दिन कटाउन गाह्रो हुन्छ, चाँडै आउनुहोला ।तपाईं आफ्नो पार्टनरका साथमाकसरी सुत्नुहुन्छ ?क) आफ्नो साइडतर्फको स्थानमै सुत्नुहुन्छ । स्थान परिवर्तन गर्नुहुन्न,ख) निद्रा नआएसम्म उनीसित टाँसिएर रहनुहुन्छ । असुविधा भए विस्तारै कोल्टे फेर्नुहुन्छ,ग) आफ्नै स्थानमा सुत्नुहुन्छ तर उनको हात समातेको वा कम्तीमा स्पर्श गरेको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ,घ) कस्सिएर आलिंगनमा बाँधिएर सुत्न रुचाउनुहुन्छ । कारण तपाईंलाई नजिक भए मात्र माया बढ्छ भन्ने लाग्छ,ङ) पूरा रात उनको अँगालोमा बाँधिनुहुन्छ ।उत्तरतपाईंको अधिकतर उत्तर ‘क’ छ भने तपाईं रोमान्टिक पार्टनर होइन ।तपाईंलाई रोमान्ससँग एलर्जी छ वा तपाईंमा रोमान्सप्रति कुनै रुचि छैन । तपाईंको पार्टनरलाई तपार्इंको लव एन्ड केयरको आवश्यकता छ । तपार्इंले आफ्नो सोचबाट बाहिर निस्किएर पार्टनरलाई लव एन्ड केयर दिनु जरुरी छ ।अधिकतर उत्तर ‘ख’ छ भने तपाईं फन्नी पार्टनर हुनुहुन्छ ।तपाईं हरेक स्थानमा मोजमस्तीका साथ रहने पार्टनर हो । तपार्इंलाई एडभेन्चर राम्रो लाग्छ । निरसता हटाउन केही नयाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ । चाहे त्यो व्यायाम, नयाँ रेसिपी होस् वा होलिडे डेस्टिनेसन । तपाईं कुल हुनुहुन्छ । यद्यपि के तपाईंको पार्टनर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । उनी खुसी वा दु:खमा खुसी हुने प्रयासमा छन् भन्ने तथ्य जान्न सके जीवन राम्रोसँग बिताउन गाह्रो हुँदैन ।अधिकतर उत्तर ‘ग’ हो भने तपाईं सन्तुलित पार्टनर हुनुहुन्छ ।यस्ता पार्टनर लङ लव लाइफ र त्यसलाई सुखमय दाम्पत्य जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । तपाईं केही नयाँ काम गर्न रुचाउनुहुन्छ तर नयाँ प्रयोग गर्दा यथार्थसित जोडिएर रहनुहुन्छ । तपार्इं यस्ती श्रीमती हुनुहुन्छ जसका साथमा पार्टनरले सुरक्षित र आराम महसुस गर्छन् । उनी तपार्इंसित आफ्नो भावना बाँड्न चाहन्छन् । तपाईं घरको जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्नुहुन्छ । तपाईंमा झगडा तथा विमतिलाई ख्यालठट्टामै समाधान गर्ने क्षमता छ ।अधिकतर उत्तर ‘घ’ छ भने तपाईं भरोसा गर्न लायक जीवनसाथी हुनुहुन्छ ।तपाईं आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम र केयरको वर्षा गर्नुहुन्छ । यस कारण पार्टनरलाई असुविधा पनि हुनसक्छ । अत: अत्यधिक लव एन्ड केयरबाट जोगिनुपर्छ । पार्टनरलाई स्पेश दिनु राम्रो हुन्छ । केही कुरा उनलाई नै छोड्नु उपयुक्त हो । पार्टनरले नै घुमाउन लगोस् भनेर बस्नु ठीक होइन । कहिलेकाहीँ आफै पनि बालबालिका, साथीभाइ वा परिवारका अन्य सदस्यहरूसित घुमफिर गर्न जानु राम्रो हुन्छ । पार्टनरको ख्याल राख्नुपर्छ तर आफूलाई आमासरह प्रस्तुत गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।अधिकतर उत्तर ‘ङ’ छ भने तपाईं सेन्टिमेन्टल ड्रिमर हुनुहुन्छ ।तपाईं अत्यन्त भावुक हुनुहुन्छ । हरेक कुरा मनबाट सोच्नुहुन्छ तर जीवन यसरी चल्दैन । तपाईं थोरै फिल्मी पनि हुनुहुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध कल्पनामा डुबेर चाँदनी रातमा सँगै रमाउने, प्रेमपूर्ण गीत गाउने, अंगालोमा बाँधिएर बस्ने, प्रेममा हराउने आदि छ । यी कुराको सोच मात्रले पनि तपाईंको आँखामा चमक आउँछ । तपाईंको मीठो स्वभाव र कुरा सबैलाई राम्रो लाग्छ । यद्यपि सपनाको दुनियाँबाट निस्किएर वास्तविकताको संसारमा आउनु आवश्यक छ । सपनाको कुरा वास्तविकतामा नहुँदा मन दुख्नसक्छ । एक–अर्काको सुख–दु:ख बुझ्ने तथा आपसी कुराकानी गरी परिपक्वता प्रकट गर्न‘ आवश्यक छ । स–साना कुराले मन दुखाउनु हुँदैन । पार्टनरको कुरा सुनेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । भावना र सपनामा अल्झनु हुँदैन । त्यसपछि मात्र सुखमय र स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न सम्भव हुन्छ ।
रोजिन शाक्य, फाल्गुन १३, २०७४
म्यांगो क्रिम जुस
भेनिला आइसक्रिम, म्यांगो जुस तथा आइसक्युब ब्लेन्ड गरी गिलासमा सर्भ गर्ने ।
नारी संवाददाता , भाद्र २०, २०७४
मोबाइल फेसन कि बाध्यता
नेपालमा केही वर्षअघिसम्म पनि मोबाइल कल्पनामा सीमित थियो तर आज मोबाइल नबोक्ने मानिस कमै होलान्।
आवश्यकता परेकै बेला भान्सामा चाहिने वस्तु कम हुन्छ
सुन्दरताप्रति तपार्इं कति सजग हुनुहुन्छ ?
सुन्दरताले महिलाहरूलाई एकातिर अरूको नजरमा प्रशंसाको पात्र बनाउँछ भने अर्कातिर उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि प्रदान गर्छ । महिलाहरू आफ्नो सौन्दर्यमा निखार ल्याउन घरेलु उपायहरूका साथै लेटेस्ट ब्युटी प्रोडक्ट्स पनि अँगाल्छन् ।
रोजिन शाक्य, माघ १०, २०७३
बुझौं आफ्नो प्रेमलाई
यदि श्रीमान् खुसी छन् र तपाईंंसित एकान्तमा समय बिताउन चाहन्छन् भने तपाईं
नारी संवाददाता , मंसिर २३, २०७३
आधुनिक युगका महिलाहरूका लागि भान्सामा माइक्रोवेभ ओभनको आवश्यकता पर्छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर २२, २०७३
स्वास्थ्यप्रति कति सजग हुनुहुन्छ ?
वर्क आउट गर्नुहुन्छ....
नारी संवाददाता , मंसिर २१, २०७३
तपाईं कति रिसाउनुहुन्छ ?
महत्वपूर्ण बैठकका लागि अफिस गैरहनुभएको छ र त्यतिबेला आफ्नो गाडीको अगाडि अर्को गाडी आएर रोकियो भने....
नारी संवाददाता , मंसिर १६, २०७३
ह र सम्मानपूर्वक जीवन जिउनका लागि प्रेरित गर्नुभएको छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर २, २०७३
मोबाइल : फेसन कि बाध्यता
नेपालमा केही वर्ष अगाडि मात्र मोबाइल कल्पना थियो तर आज मोबाइल नबोक्ने कमै होलान् ।
नारी संवाददाता , कार्तिक २६, २०७३